जब सोफियालाई किस गर्नखोज्दै थिए विल स्मिथ तब यस्तो भयो| Nepal Pati
काठमाडौं । सऊदी अरबको नागरिकता पाउने विश्वको पहिलो रोबोट सोफिया फेरि एक पटक चर्चामा छिन् । हालै, हलिउड अभिनेता विल स्मिथ सोफियासँग डेटमा गएका थिए । त्यसवेलाको भिडियो अभिनेताले उनको युट्युव च्यानलमा पोष्ट गरेको छन् । सोफियाले पनि उनको ट्विटर एकाउण्टमा पोष्ट गरेकी छिन् ।
कुराकानीका क्रममा, सोफियाले विल स्मिथको कुराहरुको थुप्रै अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । सोफियाले ६२ तरिकाबाट अनुहारको अभिव्यक्ति दिन सक्छिन् । त्यस समयमा विल स्मिथले सोफियालाई किस गर्न कोशिस गरेका थिए । तर के भयो भन्ने कुरा धेरै रमाइलो छ।
सोफियाले भनिन् ‘मलाई लाग्छ कि हामी असल मित्र हुन सक्छौं। हामीले धेरै समय सँगै बितायौं भो एक अर्काको बारेमा जान्नेछौं । अब तपाईं मेरो मित्रको सूचीमा हुनुहुन्छ।’ त्यस बेला विल स्मिथले सोफियालाई धेरै प्रश्न गरेका थिए । जस्तो कि कस्तो प्रकारको संगीतले मनपर्छ ?
भर्खरै मात्र रोबोट सोफिया कॉस्मोपोलियनको आवरण बनेकी छिन् । म्यागेजिनको मार्च अंकमा सोफियालाई शूट गरिएको छ । हान्सन रोबोटिकट सीईओ डा. डेविड हसनले रोबोट सोफियालाई बनाएका हुन् । सोफिया हलीउड अभिनेत्री आड्री हेपबर्न जस्तै देखिन्छन् ।
धेरै अधिवेशनहरूमा नियमित वक्ताको रुपमा रहेकी रोबोट सोफियाको भिडियो धेरै भाइरल भएको छ । सोफिया, बनेको मात्र दुई वर्ष भएको छ । उनको सपना मान्छेको जीवन अझ राम्रो बनाउन मद्दत गर्ने रहेको छ । सोफिया जस्तो रोबोट बनाउनेलाई लिएर धेरै आलोचना पनि भएको छ ।
एक अन्तरबार्तामा सोफियालाई मनपर्र्ने बलिउड स्टारको बारेमा सोधिएको थियो । त्यसको जवाफमा सोफियाले शहरुख खान भएको बताएकी थिइन् । सोफिया को यो खुलाशा पछि , शाहरुखले पनि आफ्नो खुशी व्यक्त गरेका थिए ।